Lifestyle News | Health Tips | Life & Latest Trends on Fashion
04 Jul 2022 | सोमबार, २० आषाढ, २०७९ | Edition : Nepal | UK | Australia
मस्तिष्काघातः ‘समयमै विशेषज्ञ उपचार पाए पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकिन्छ’
चिकित्सकका अनुसार मस्तिष्काघात उभिँदा शरीरको सन्तुलन नमिल्ने, आँखाले नदेख्ने वा आँखा धमिलो हुने एक्कासी मुख एकातिर बाँङ्गिने, हातखुट्टा एक्कासि कमजोर हुने, बोली नआउने वा बोली लरबराउने र शरीररको एक भाग (हर) कमजोर हुन सक्छ । विस्तृतमा
घरको कुन दिशामा सुगाको तस्वीर राख्दा मेटिन्छ सबै दोष, जान्नुहोस् वास्तु टिप्स
एजेन्सी । हाम्रो जीवनमा वास्तुशास्त्रको धेरै महत्व छ। वास्तुको सही ज्ञानले तपाईको जीवनमा सुख र शान्ति ल्याउँछ। वास्तुशास्त्रमा घरको कुन दिशामा सुगाको तस्वीर राख्दा सबै दोष मेटिन्छन्बारे उल्लेख छ ।
मुटु स्वस्थ राख्नका लागि अदुवा !
निरन्तर बाडुल्की आउने समस्यामा समेत अदुवाले ठीक गर्छ । अदुवाको एक टुक्रा चुस्ने अथवा दुधमा एक चम्चा अदुवाको रस खाने हो भने बाडुल्की ठीक पार्छ ।
पेटको बोसो घटाउन सेवन गर्नुपर्ने यी सात खानेकुराहरु
काठमाडौं । लसुन एक प्राकृतिक एन्टी बायोटिक औषधि हो । यसले सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने काम गर्छ । लसुनले शरीरमा ती हर्मोनलाई सक्रिय गर्ने काम गर्छ जसले बोसोलाई जम्मा हुन दिँदैन । आफ्नो खानामा लसुनलाई समावेश गरेर हेर्नुहोस् ।
प्याज सेवन गर्दा मिल्ने फाइदाहरु
प्याजमा क्युरसेटिन नामको रसायन हुन्छ, जसले ग्याष्ट्रिकबाट पनि बचाउछ। प्याजले विभिन्न संक्रमण र रोगहरुबाट बचाउँछ। प्याजमा विभिन्न पोषणतत्व हुन्छ जसले हामीलाई अन्य रोग लाग्नबाट पनि जोगाउँछ।
बजारमा विषादी प्रयोग गरी पकाइएको आँप
जनकपुर । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलगायत सहरमा कार्वाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय किसानको बगैँचामा फलेको आँप असारको दोस्रो सातापछि मात्र पाक्ने भएपछि व्यापारीले कार्वाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण गरिरहेका हुन् ।
वास्तुशास्त्रः भान्सामा कस्तो खाले तस्बिर राख्ने ?
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा भान्सामा तस्विर राख्ने बारे बताइएको छ । भान्सा घरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान हो । त्यसैले, यसको सौन्दर्य र सौभाग्यको ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। भान्साघरमा माता अन्नपूर्णाको तस्बिर हुनुपर्छ ।
वास्तुशास्त्रः कोठामा किन राख्ने हंस जोडीको तस्बिर ?
एजेन्सी । वास्तुशास्त्रमा हंसको जोडीको फोटोबारे बताइएको छ । यदि तपाईको वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै प्रकारको तनाव चलिरहेको छ वा तपाईको जीवनसाथीसँग तपाईले चाहेको सम्बन्ध बनिरहेको छैन। यसका लागि आफ्नो बेडरूममा दुई हंसको जोडीको सुन्दर तस्विर राख्नुहोस्।
झगडा पर्दा यी ५ कुरामा अत्यन्त ध्यान दिनुहोस्
लडाइ–झगडा हुँदा मानिसहरु कडा र तिखा शब्दहरु ज्यादा प्रयोग गर्छन् जसका कारण सम्बन्ध झन् बिग्रिएर जानेगर्छ। सम्बन्धमा सत्यता हुनु आवश्यक पर्छ। धेरै खुल्लापन हुनुपनि सम्बन्धको लागि हानिकारक हुनेगर्छ। ज्यादा खुल्लापनले पनि पार्टनरसँग झगडाको वातावरण धेरै बन्ने गर्छ।
थकान र तनावका कारण पुरुषहरु हृदयघातको शिकार हुनसक्छन्, यी सावधानी अपनाउनुहोस्
एजेन्सी । थकान र तनावको सामना गर्ने पुरुषहरूमा हृदयसम्बन्धी समस्याहरूको उच्च जोखिम हुन्छ।
घरको यो दिशामा कुलर नराख्नुहोस्ः वास्तुशास्त्र
एजेन्सी । गर्मीमा लगभग हरेक घरमा कुलर चल्छ, तर तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, तर कूलर राख्नको लागि सही दिशा पनि छ। वास्तुका अनुसार कुलर सही दिशामा राख्दा सुतेको भाग्य जाग्छ र घर धनसम्पत्तिले भरिन्छ ।
काठमाडौँ। पछिल्लो केहि महिनायता विदेशी पर्यटक आवागमनको संख्या घट्दै गएको छ। गत अप्रिल महिनाको तुलनामा मे र जुन महिनामा विदेशी पर्यटक आवागमनको संख्या घटेको हो। अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार गत अप्रिल महिनामा ५८ हजार ३४८ जना पर्यटक भित्रिएका थिए।
एजेन्सी । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि एक जना मन्त्रीले गम्भीर आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि उनीमाथि धेरै आरोप लागेका छन् । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका गृहमन्त्री अता तराडले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि निकै गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । उनले इमरान खानलाई सुरुदेखि नै लागूऔषध सेवन गर्ने लत रहेको आरोप लगाएका छन् ।